Khasaarada Dhimashada iyo Dhaawac ka Dhashay Laba Beelood oo ku Dagaalamay Daegmada Degoble ee Hoosta Darar-wayne. - Haldoornews
Dararwayne(Haldoornews)-Ilaa hada sadex qof ayaa ku dhintay inta la ogyahay,sideed kalena waa ku dhaawacmaeen is horimaad ka dhacay degaanka Degoble iyo darar weyne ,ka soo u dhaxeeya laba beelood oo halkaas wada degan .
Iska horimadkan ka dhacay labada goobood ayaa wararku sheegayaan inuu xoog badnaa ka ka dhacay dhinaca Dogoble,kaasoo la sheegay inuu gabalku u dhacay. dhinaca magaalada Dararweyne ayaa isaguna hayn iska horimad laba dhinac balse la sheegay in dad maqaaxi fadhiya oo ka shaahaynaya koox hubaysni ku furtay rasaas halkaasna ya ka dhacday dhimasho iyo dhaawac.
Xukuumada ayaa hore degaamadaas uga qaaday ciidamadii ay kala dhex dhigtay islamarkaana isku daawanaysay mudo bil ah abaabulka ka socda,sidoo kalena wax go,aana ka soo saarin heshiisintii nabadeed ee laga dhexwaday.
Xubno ka tiesan Xukuumada iyo Boqor muudow ayaa si weyn loogu eedaynayaa hurinta collada ka jirta degaankaasi,iyadoo wararku sheegayaan in Boqor Buurmadow Muusanow la wareegayo Dibadaha gaarhaan imaaraadka carabta.
Khasaaraha dagaalka galabtan ka dhacay degaamadaasi,ayaa ilaa hada si dhaba loo ogayn tirada dhimasho iyo dhaawaca Gaarhaan dhinaca Dogoble oo kalba warraku inku sheegayaan balse ilaa hada waxa la sheegayaa in dhaawac afara iyo dhimaso laba ah inay jirto labada dhinac.
Gudoomiyaha Xisbiga Wdaani ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya degaankaas,mana jiraan ilaa hada ciidamo ay xukuumadu u dirtay,
Qaxoonti lagu celiyey somalia oo dib ugu soo laabtay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya .